Anarana Ninoslav Marina
Teraka 25 Septambra 1974
Firenena Masedônia Avaratra
Ninoslav Marina (Masedoniana: Нинослав Марина, teraka 25 septambra 1974) dia mpandraikitra ambony (rektora) ao amin'ny Oniversite momba ny siansa sy ny teknolojia momba ny fampahalalam-baovao "Saint Paul the Apostle" ao Ohrid, Masedonia sady Filohan'ny Kaonferansan'ny Rektora ao amin'ny anjerimanontolom-panjakana ao amin'ny Repoblikan'i Masedonia. Eo ambany fitarihan'ny Rector Marina, ny UIST dia laharana fahatelo any Masedonia. Ny fanakilasiana dia nataon'ny Oniversiten'i Shanghai Jiao Tong University ary ny mari-pahaizana dia nihatsara avy amin'ny 44.1 points amin'ny taona 2012 ka hatramin'ny 94.5 amin'ny 100 amin'ny 2016.
Taorian'ny nahavitan'ny fianarana ambaratonga faharoa tao amin'ny Fakiolten'ny Fampiasam-pahefana Elektroteknika ao amin'ny Oniversiten'i Saint Cyril sy Methodius ao Skopje dia nahazo ny mari-pahaizan'ny doktora tao amin'ny École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) tamin'ny taona 2004. Niara-niasa tamin'ny Nokia Research Center tao Helsinki ny vokatry ny asa fikarohany dia moma ' teorinn'ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana tsy misy tamriby Ny Ninoslav Marina dia talen'ny R & D tao amin'ny Samowoon Technologies nanomboka tamin'ny taona 2005 ka hatramin'ny 2007, izay nitarika ny fampiroboroboana lohan-danja iray mba handrefesana ny harerahana, ny adin-tsaina sy ny torimaso ho an'ny mpanamory sambondanitra, kosmonaota, mpamily ary mpitandro filaminana. Nanomboka tamin'ny 2007 ka hatramin'ny 2008, Dr. Marina dia mpikaroka nasaina tao amin'ny Oniversiten'i Hawaii tao Manoa, noho ny fisian'ny vatsim-pianarana tao amin'ny Fondation Swiss National Science. Hatramin'ny 2008 ka hatramin'ny 2009, niasa ho mpikaroka aorian'ny diploma doktorà tao amin'ny oniversiten'ny UNIK Graduate Center ao amin'ny Oniversiten'i Oslo miasa amin'ny tetikasan'ny Vaomieran'ny Fikarohana any Norvezy. Nandritra ny vanim-potoana 2009-2012, ny Prof. Marina dia mpikaroka ao amin'ny Postdoctoral Research tao amin'ny Oniversiten'i Princeton momba ny fikambanam-piraisam-pirenena malaza Marie Curie Iraisam-pirenena eo ambany fandaharan'asan'ny Seven Framework (FP7). Tamin'ny taona 2014, ny Dr. Marina dia nahazo famatsiam-bola avy amin'ny fandaharan-draharahan'ny Federasiona Soisa sy Soisa ary nanana tetikasa momba ny fametrahana tahirin-kevitra miaraka amin'ny Oniversiten'i Campinas ao amin'ny fanjakan'i São Paulo.
Zava-bita ara-tsiansa[hanova | hanova ny fango]
Prof. Marina dia nanoratra lahatsoratra ara-tsiansa maherin'ny 100 sy boky ary lahatsoratra malaza. Mpampianatra vahiny izy tao amin'ny oniversite mihoatra ny efapolo tany amin'ireto firenena ireto: Etazonia, Rosia, Shina, Angletera, Japana, Frantsa, Alemaina, Soisa, Holandy, Brezila, Norvezy, Finlandy, Belzika, Aotrisy, Hong Kong, Malezia, Isiraely, Repoblika Tseky, Maroka, Polonina, Romania, Gresy, Egypta, Kroasia, Boligaria, Serbia, Azerbaijana, ary Moldavia. Nanangona vola be izy tamin'ny alalan'ny fitaovana isan-karazany na tao amin'ny akademia na tao aminn'ny indostria, anisan'izany ny CTI Swiss, ny NSF, ny Vaomieran'ny Fikarohana Norveziana, ny Vaomiera Eoropeana ary ny Masoivohon'ny ana habak'i Eoropa. Izy dia manam-pahaizana amin'ny Programa lasitry ny Vaomiera Eoropeana. I Marina dia mpikambana ao amin'ny Ivon-toeran'ny Injeniora Elektrisiana sy Elektronisiana (IEEE) sy filohan'ny ny Komitin'ny Fandaharan'asa Teknika ho an'ny Kongresy Iraisam-pirenena momba ny Lamin'ny Fifandraisan-davitra sy ny Fanaraha-maso (ICUMT). Izy no mpikambana mpanorina ary filohan'ny sehatry ny fikambanana IEEE momba ny fampahalalam-baovao IEEE tamin'ny 2016 sy 2017. Tamin'ny Jolay 2015, Dr. Marina dia nasain'ny Filohan'ny vivoriana faha-69-n'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana, H.E. Andriamatoa Sam Kutesa eo amin'ny Vondron'ny manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra fiadian-kevitra amin'ny fifanakalozan-kevitra tsy ara-potoana momba ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny fiarahamonin'ny fampitam-baovao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ninoslav_Marina&oldid=999627"
Teraka tamin'ny taona 1974
Voaova farany tamin'ny 2 Janoary 2021 amin'ny 06:39 ity pejy ity.